Abathwali befashoni ye-Instagram Qhubeka ukuze u-Amp Up Umdlalo wabo weSitayile
Kule veki iphelileyo, ezinye zeenkcenkce ezibalaseleyo kunye neenkwenkwezi zesitayile e-Afrika zaphuma kuluhlu lwamabala akhangelekayo athe, okwabelwana ngawo kwi-Instagram. Ubuntu beTV baseGhana Nana Akua Addo wayeyinkosazana eyi-sultry emnyama njengoko yayisingathe ama-Exclusive Men of the Year (i-EMY) amabhaso e-Afrika angama-2020 awayebanjelwe e-Accra nge-4 kaJulayi. Yvonne Nelson, ngokuqinisekileyo kusenza sinqwenele ukuba sithathe ikhefu lasehlotyeni ukonwabela imozulu kwisinxibo esineentyatyambo ezihle zamabala kunye nesitayile esasihamba yonke indlela sisiya kwindawo yakhe ye-pelvic. Iifoto zezitayile ze-Instagram
Ngapha eNigeria, ukubhiyozela umhla wakhe wokuzalwa, usomashishini odumileyo I-Chioma Ikokwu Usinike enye ingxelo engenakulibaleka ekhangeleka eneenkcukacha ezingapheliyo njengoko wayebambe ipati yeti ye-luxe kunye nesidlo sangokuhlwa nosapho kunye nabahlobo.
Inkangeleko ekwabelwana ngayo kwiveki ephelileyo ngabafuduki befashoni yase-Afrika kunye nabantu abadumileyo kwi-Instagram kwakungekho nto imfutshane kwi-chic kunye nenhle kwaye kukhuselekile ukuba sithi siphila ngokusondeleyo ngabo.
UNana Adjoa Walker
Cee-C I-Chioma Ikokwu Okufumaneka Isitayile sefesitile ye-Instagram UJulitha Kabete Lisa Folawiyo Lola OJ UNana Adjoa Walker Nana Akua Addo sarlea mah Stephanie Linus Yvonne Nelson